Satọdee 7 Ọgọọst 2021
Ubi Ubi nke Tiger Glen bụ ogige nchebara echiche wuru na nku ọhụrụ nke Johnson Museum of Art. Site n'ike nke China, ana - akpọ atọ Laughers of the Tiger Glen, si n'ike mmụọ nsọ, nke ụmụ nwoke atọ meriri esemokwu dị iche iche ha na ibe ha iji wee chọta ịdị n'otu nke ọbụbụenyi. Emere ogige ahụ n'ụdị mmụọ a na-akpọ karesansui n'asụsụ Japanese nke ejiri kee okwute maka okike kee ya.
Ihe Ndozi Ozo
Fraịdee 6 Ọgọọst 2021
Ihe Ndozi Ozo Ihe oru a bu ka idebe onodu ugwu ahu, n’enweghi ihe ncheta di egwu nke ndi noo n’elu ugwu. O metụtara nnukwu nrụzigharị nke ụlọ elu ugwu. A ga-eme ihe ọ bụla na saịtị ahụ, na-eji dị ka ihe ndị bụ isi nke ọla, osisi fir na agụkọta mineral, ọrụ mmadụ na nka. Isi echiche dị na nke ahụ bụ ịhapụ ka ihe ndị ahụ nweta ma chekwaa oke mgbe ndị nwe ya ga-ahụ na ha bara uru ma mara ha nke ọma, tinyekwa iji ikike imepụta ihe na-agbanwe.
Tọọzdee 5 Ọgọọst 2021
Ụlọ Oriri Na Ọ Restaurantụ Isụ Biteta ụta dịka isiokwu ekike, eserese eserese, ihe nlere ezé, ihe nlere anya n’ebube isi bụ ihe niile dị mkpa na - enyere aka ịkwalite uto nke ndị ahịa niile. Site na aja aja mara mma nke na-acha aja aja na nke na-acha ọcha eserese, na -acha ọcha eserese nke mgbidi, ruo na ngwa ngosi ngwaahịa a haziri nke ọma, ya na akara ngosi iri ise na-anọchi anya afọ iri dị iche iche, ọgaranya mara mma nke ọchị ihe ọchị na-agbagha.
Wenezdee 4 Ọgọọst 2021
Nhazi Ụlọ Ọrụ Ndị a na-ezipụ bụ ịmepụta oghere ọgbara ọhụrụ nke na-ahazi usoro ọgwụgwọ dabere na teknụzụ dị elu ka na-enye ọgwụgwọ spa. Ihe ewepụtara bụ imepụta oghere dị omimi nke na-eweta mkpesa nke labs sayensị ma na-agbakwụnye nkọwa dị n'etiti njikọ dị omimi. Nkpali nke ulo elu ulo sitere na ihe omumu nke zen na odidi dyadic nke cosmos. White lavaplaster na-egbochi ihe nlere na-acha ọcha na sayensị, na agba aja aja sitere na palette kpochapụwo na-egbochi ịkọwa ụtọ nke ọchịchọ mmadụ.
Mọnde 2 Ọgọọst 2021
good morning original calendar 2012 “Farm” Kalenda Satọdee 18 Septemba
inci Seramiiki Fraịdee 17 Septemba
Prisma Onye Na-Ahụ Maka Ntụpọ Ultrasonic Nwere Ntụpọ Tọọzdee 16 Septemba
Ubi Ihe Ndozi Ozo Ụlọ Oriri Na Ọ Restaurantụ Isụ Nhazi Ụlọ Ọrụ Ebe Ihe Ngosi Na Oghere Nkpa Ahia